Apple ichawedzera basa rekutarisa kurara, chiitiko chinosvika gore rinouya | Ndinobva mac
Sezvatinogona kuBloomberg, Apple iri kushanda pachinhu chitsva chinobvumidza kuongorora kurara kwevashandisi kuburikidza neApple Watch. Zvinoenderana nechinyorwa ichi, Apple yanga ichishandisa iri basa rekurara kwemwedzi yakati wandei pakati peboka revashandisi, zvinoenderana nevanhu vane hukama nebasa iri.
Kana iko kushanda, kuri parizvino iri mukuvamba kwayo, inopa mhedzisiro yakanaka, iyo Cupertino-based kambani inogona kuiwedzera kuApple Watch muna 2020, sekureva kwevamwe vanhu vari kubatana pabvunzo.
Zvinotaridza kunge kusvika parizvino, tarisa kurara yanga isiri yekutanga kuApple, Sezvo, sezvatinoona, pakutanga akaisa pfungwa pakuongorora moyo wedu kuti aone zvirwere zvinogona kuitika, mashandiro atakataura nezvazvo kakawanda uye zvakabatsira vanhu vazhinji kuziva kuti vaive nechirwere chemwoyo vasingazive.
Iyo inogadzira Fitbit, yakagara ichipa iyo yekurara yekutarisa system, mashandiro ayo anowanikwa muWatchOS, anotimanikidza kuti tishandire kune vechitatu-bato kunyorera, sezvo isingawanikwe natively. Sezviri pachena chikonzero chekushaikwa kwechinhu ichi ndechechikonzero chakanaka: hupenyu hwebhatiri hwechizvarwa chekutanga hwakapedza maawa gumi nemana akavimbiswa nemugadziri, zvichimanikidza vashandisi kubhadharisa chishandiso pavakarara.
Zvinopfuura zvingangoita izvo Apple iri kugadzira tekinoroji yekambani yeBeddit, kambani yaakawana zvishoma pamusoro pegore rapfuura iyo yakapa bhendi yenzwi yekutarisa kurara. Iyi tambo yekutarisa kurara ichiri kutengeswa uye muchokwadi, mwedzi mishoma yapfuura, yakatanga chizvarwa chechipiri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple ichawedzera chimiro chekutarisa kurara, chiitiko chinosvika gore rinouya
Iyo yazvino Apple patent inoratidza isu magirazi anokwanisa kuratidza mapoinzi ekufarira mumaguta
Dhawunirodha mutambo Thimbleweed Park yeMac zvachose wakasununguka kubva kuEpic Games